Serafim Sarovsky - एक संरक्षक के? यो प्रश्नको जवाफ हामी पहिलो जीवन प्राचीन बाटो सिक्न आवश्यक छ। आखिर, यो सेन्ट को नाम व्यापक दुनिया भर, विशेष गरी रूस मा उहाँलाई श्रद्धा प्रकट गरिएको छ। भगवान उसलाई विगत बारेमा निको पार्ने क्षमता, साथै भाषण दिनुभयो, भविष्यमा भविष्यवाणी। को सन्तहरू प्रार्थना अनुरोध काम चमत्कार: सबैभन्दा पोषित इच्छा गर्न निको, एक कठिन अवस्था बाहिर तरिका फेला पार्न मद्दत।
को venerable एल्डर को जीवन को बाटो को संक्षिप्त विवरण
संरक्षक सेन्ट Serafim Sarovsky कुर्स्क एक देशी। जुलाई 19, 1759 - आफ्नो जन्म सही मिति ज्ञात। शिशु बप्तिस्मा मा Prokhorov नाम पाए।
चमत्कार एक प्रारम्भिक उमेर देखि केटा के गर्न थाले। एक मामला मा, Prokhorov प्रतिरोध र चर्च को घण्टी टावर बाट खसे सकेन। यो चमत्कार तिनीहरूले केटा पूर्ण क्षति नपुराउने थियो देखे।
Prokhor बाल्यकाल धर्मशास्त्र पढ्न प्रेम देखि, खुसीसाथ म चर्च गए र जोस अक्सर प्रार्थना गरे।
1776 मा कीव-Pechersk Lavra मा fateful बैठक भयो र जवान Prokhor प्राचीन जो बाहिर उहाँले Sarov wasteland मा पर्दा लिनुपर्छ कि, जवान औंल्याए Dositheus।
2 वर्ष भित्र केटा Sarov विहारको एक साईट भयो जहाँ तामबोभ प्रान्त, थियो। भाकल गरे र एक भिक्षु Seraphim भयो - र 8 वर्ष पछि, 1786 मा, उहाँले भन्नुभयो के Dosifej गरे।
Seraphim छैन बाँकी खाँचो परमेश्वरले आफूलाई उहाँको सेवा गर्न बल दियो छन्। 1794 मा उहाँले एउटा मौन कमाल गरे र निरन्तर प्रार्थना गर्न सक्षम हुन जंगल मा बसे।
Seraphim उजाडस्थानमा 16 वर्ष बिताए र 1810 मा 1825 सम्म लामो अर्को गेट, लिन विहारको फर्के। सबै त्यसै वर्ष 25 नोभेम्बर परिवर्तन छ। सपना मा, Sarov को Seraphim परमेश्वरको आमा थियो, र सल्लाह, निर्देशन र निको तिनीहरूलाई मदत गर्न मान्छे पाहुना आफ्नो भाकल को कार्यान्वयन रोक्न र सुरु गर्न तिनलाई यसो भन्नुभयो।
पिता Seraphim प्रार्थना मार्फत चमत्कार
परमेश्वरको प्रेम र asceticism को साहसिक कार्य को लागि Seraphim मान्छे निको र महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भविष्यवाणी गर्न उपहार प्रभु प्राप्त। उहाँले ऋषि सल्लाह दिने, कठिनाइको हटाउन मदत, सबै भूत र भविष्य बारेमा थाह थियो। उहाँले सल्लाह के कहिलेकाहीं मानिसहरूले अनौठो र अबोध्य जस्तो, तर सावधान भएकाहरूलाई सबै भन्नुभयो पिता Seraphim, यो अर्थमा बनाउँछ छ थप विश्वस्त भविष्यवाणी गर्न।
Serafim Sarovsky - एक संरक्षक के? उहाँलाई सल्लाह र सोधेर लागि जाने, त्यो शारीरिक र मानसिक रोगबाट को उपचार मा मदत र कहिलेकाहीं सल्लाह समस्या रोकियो।
उहाँलाई आउनुभएका सबै उहाँले प्रार्थना र चमत्कारी वसन्त पानी संग मदत गरे। यो पानी पिता Seraphim निको उपचार आशाहीन विरामीहरु धेरै अवस्थामा रेकर्ड भयो।
को सेन्ट निको वसन्त को मृत्यु पछि विचित्रताहरू काम जारी छ। यसको पानी, यो जीवन लाभ, साँच्चै चिकित्सकीय छ स्वास्थ्य र मन को शान्ति दिन्छ।
तर मुख्य चमत्कार Sarov को सेन्ट Seraphim पछि बाँकी छ कि - प्रार्थना छ। यो प्रार्थना मार्फत तिनीहरूले गर्ने, तिनीहरूलाई मायालु परमेश्वर आफ्नो अनुरोध पठाउन लामो मान्छे, केही क्षमता संग endowed आफूलाई व्यवहार छैन छन्, ज्ञात गरिएको छ, अनुरोध कार्य गर्दछ। सेन्ट Serafim Sarovsky र अहिले एल्डरहरूको इच्छा पूरा भनेर हामीलाई सबै परमेश्वरको सामु, त्यसैले चमत्कारी प्रार्थना लागि प्रार्थना, कठिन समयमा छुटकारा, समस्या हटाउन मद्दत गर्छ।
Serafima Sarovskogo को प्रतिमा
अब सेन्ट Serafima Sarovskogo प्राचीन धेरै revered प्रतिमा छन्। आफ्नो छवि चित्रण प्रतिमा तर भित्ति चित्र मा चित्रण गरिएको मात्र छैन।
त्यहाँ कुशल कलाकार द्वारा लिखित केही समयअघि venerable एल्डर को मृत्यु पछि उहाँलाई थाह थियो जो मान्छे को संलग्नता संग छन् चित्रित प्रतीक हो। यो Serafima Sarovskogo, अब मास्को Theological एकेडेमी मा राखिएको छ जो प्रसिद्ध पोर्ट्रेट बचाउँछ।
मसीही संसारमा Serafima Sarovskogo उपासनाको अनुहार मा, उहाँलाई सहायताको लागि अनुरोध गर्न को लागि, उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहोस्।
Serafim Sarovsky - एक संरक्षक के?
यहाँ हामी मुख्य मुद्दा आउँछन्। स्मृति पवित्र पिता को Seraphim विश्वासीहरूले वर्ष दुई पटक पूजा: जनवरी 15 र अगस्ट 1। तर यस सन्तहरू यी दिन केवल प्रार्थना मतलब छैन। विश्वास गर्न र राम्रो सोच्न - निष्कपट प्रार्थना मुख्य कुरा हो, कुनै पनि समयमा प्रभावी छ।
जसको संरक्षक सेन्ट Serafim Sarovsky? उहाँलाई सहायताको लागि लागू हुन्छ र पाप को अवस्था मा dismay मा, शैतानिक प्रलोभन उन्मुक्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँले प्रेम को कृपा उपहार लागि आग्रह गरिएको छ। यो मन र शरीर को रोग हटाइ वित्तीय समस्या समाधान गर्न मद्दत, स्मृति को विकास मा मद्दत गर्छ।
तपाईं बस मात्र आफूलाई लागि, हामी आफ्नो प्रियजनलाई लागि र आफ्ना शत्रुहरूलाई लागि प्रार्थना गर्न सक्छौं भने Sarov को Seraphim प्रार्थना प्रभावकारी छन्।
सुखी विवाहको लागि प्रार्थना
Serafim Sarovsky - विवाहको संरक्षक। को एक्लो केटी को भाग्य व्यवस्था गर्न अनुरोध यस पवित्र द्वारा। यो लामो अर्डर मद्दत प्राप्त गर्न, एक प्रार्थना पर्याप्त छैन, कि ज्ञात गरिएको छ। यो पानी मा पढ्ने छ भने प्रार्थना प्रभावकारी हुनेछ। वसन्त - र यो लागि यो सबै भन्दा राम्रो जीवित पानी दृष्टिकोण छ।
उनको प्रार्थना, पोत एक रोशनी नजिकै ठाउँ पढ्न भएको पानी एक लीटर लिएर चर्च मोमबत्ती र Serafima Sarovskogo को प्रतिमा। तपाईं पानी पिउन र आफ्नै सुत्ने र कोठा छिडकना आवश्यक त तयार पारे।
- पक्कै, हामी अनुरोध को मुख्य विशेषता भनेर बिर्सनु हुँदैन परमेश्वरको मा विश्वास र विश्वास एउटा चमत्कार हुनेछ, र तपाईं आफ्नो भाग्य पूरा हुनेछ।
लेट विवाह को संरक्षक, त्यसैले अक्सर सबै आफ्नै भाग्य व्यवस्था आशा गुमाएका ती उसलाई उल्लेख - यो Serafim Sarovsky कि विश्वास छ। तपाईं 30 वर्ष पुरानो वा बढी छन् भने, र तपाईं अझै पनि एक्लो हुनुहुन्छ, सम्पर्क पिता Seraphim र निष्कपट प्रार्थना गरिन्छ कि आश्वासन आराम।
धेरै बलियो आमा किनभने परमप्रभुले आफ्नो प्रिय बच्चा को आमा कुनै पनि अनुरोध स्वीकार गर्नेछ, उनको छोरी विवाह गर्न चाहन्छ कि एक प्रार्थना गर्न मद्दत गर्नेछ।
Sarov को Seraphim कसरी प्रार्थना गर्न
रूस मा यो पवित्र प्रेम र उपासनाको। Serafimushka, प्राचीन, पिता, परमेश्वर, बुबा Seraphim, Wonderworker को सेन्ट: मायालु उहाँलाई गरिएका जो लामो देखि भएको छ।
यो हृदय आए रूपमा लामो रूपमा राम्रो विचार संग सफा थियो तपाईं जस्तै प्रार्थनामा खोज्न, र तपाईं।
त्यसैले, Serafim Sarovsky - एक संरक्षक के? शायद प्रश्न सबैका हामी विश्वास र प्राचीन परमेश्वरको उपासना साँचो चमत्कार सिर्जना भनेर थाहा किनभने, आफूलाई लागि जवाफ हुनेछ।
पवित्र मृत्यु पछि, अर्थोडक्स मान्छे विश्वासमा उहाँलाई गरिएका र चमत्कार भयो। पनि 1895 मा, एक विशेष आयोग पिता Seraphim प्रार्थना पछि भयो कि 94 चमत्कारी निको पार्ने रेकर्ड छ। यो सधैं विश्वासी समर्थन गर्न तयार छ जो सेन्ट, को सहयोग को वास्तविक अवस्थामा मात्र एउटा सानो अंश हो।
माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation - विहार। माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation को Monasteries
यात्री यूरी Senkevich: जीवनी, इतिहास र जीवनको बाटो
ट्याब्लेटको "Ladasten": प्रयोगको लागि निर्देशन। डाक्टर को समीक्षा र दबाइ को अवस्थित analogues
घर P44T: आयामहरु संग लेआउट
Khachapuri द्रुत नास्ता। Housewives लागि godsend
समीक्षा "भय हिड्ने मृत": विधा, अभिनेता र वर्ण
Grigory Drozd। सफलताको कथा
Tiramisu केक नुस्खा
मास्को मा ठूलो hypermarkets: तस्बिर र समीक्षा